Galateeffannaa-የቐንይልና!!Ummataa fi mootummaa Ertiriyaaf galata guddaa qabna Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGalateeffannaa-የቐንይልና!!Ummataa fi mootummaa Ertiriyaaf galata guddaa qabna
Galateeffannaa-የቐንይልና!Ummataa fi mootummaa Ertiriyaaf galata guddaa qabna. Roorroon nutti hammatee baqattoota yeroo turreetti nu simattanii deeggarsa barbaachisaa waan nuuf gootan ummanni OROMOO hin irraanfatu. Ulfaadhaa!!
በገዛ ሀገራችን ጭቆና በዝቶብን በተሰደድን ጊዜ ተቀብላችሁ በሚያስፈልገን ነገር ሁሉ የተባበራችሁን ኤርትራውያን እናመሰግናለን።
LAAFAAN TASUMAA KABAJAA HIN ARGATU: TINNISA WBO!
Addunyaa kana hundaatu humnatti amana. Sababni humnatti amanuuf garuu dhibdee hunda qawween furachuuf miti. Jabaa tahan malee kabajamanii buluun waan hin yaadamneef. USAfi Rusian qabsoo karaa nagayaatti amanu. Garuu humna isaanii guyyaadhaan jabeessuun akkamitti kabajamanii akka jiraachaa jiran ilaaluu qabna.Jaarsa buleessa jala olii-gadi adeemeen irraa barachaa ture. Ani ilma jaarsa sanaati jechuun ni danda’ama. Jaarsi kun yeroo hunda amna QBOti yaada,xiinxala,mooraa qabsoo gabbisuuf hojjeta. Kana guyyaa tokko “yaa dhala koo,bara tokko akkaataa hidhannoo WBO xiinxalleeti,humni sabaa WBO hidhachiisuuf qophaa’e maal hangam akka gahu tilmaamuu jalqabne. Baay’ina lakkoofsa sabaa miliyoona 30tti qabannee,utuu qarshii kudhan-kudhan WBO hidhachiisuuf gumaachee Oromoon silaa bilisa of ni baasa jenne. Kana keessaa yeroo qorannu garuu dammaqinsa yeroo sana tureen kan sirritti dhimma kana hubatee harka laatu miliyoona tokko illee hin ga’u ture” jedhe. Waaniin dhimma kana kaaseefiin qaba.
~Har’a lakkoofsi Oromoo miliyoona 56 olitti tilmaamama.
~Miliyoonni kun hundinuu dammaqee jira.
Silaa miliyoonni 56 kun waan jaarsi gaafa sana yaade sana godhee maal akka godhuu dandeenyu haa xiinxalluu! Kanaaf,ummanni karaa kanaan irra-deebinee haa of ilaalluu. Waamicha WBOn ammatti nuuf taasisaa jiru haa owwaannuu,keessattuu Oromoonni Oromiyaa keessa jiraachaa jirru!
In Finch’A’A, Shewa, Ethiopia.My beautiful country Oromia ❤️ 💚 ❤️
Via: Ayantu Oromia